Usatya, Iyo Yakajeka Cognos Kusimudzira Iri Pano - Motio
Sep 22, 2021Case Studies, Financial Services, MotioCI, Ndiwedzere Factory
CoBank inopa zvikwereti, mareti, mari yekutengesa kunze, uye mamwe masevhisi emari kumaruwa eAmerica. Ivo vanoshandira bhizinesi rezvekurima, simba rekumaruwa, mvura, uye vanopa kutaurirana mune ese makumi mashanu United States. Senhengo yeFarm Credit System, CoBank chikamu chemubatanidzwa wenyika yose wemabhangi nemasangano ekukweretesa vatengi anotarisana nekutsigira zvinodiwa pakurima, zvivakwa zvekumaruwa, uye nharaunda dzekumaruwa.
CoBank uye Cognos
CoBank ine nzvimbo shanu dzeCognos kuona kuti vanogona kubata mapurojekiti pamagumo ebhizinesi. Izvi zvinogonesa timu kuti ishande nechivimbo pazvinhu zvakawanda panguva imwe chete. Iyo data nharaunda uye ETL nharaunda inogona kunyatso paradzaniswa. Izvi zvinoguma nekuyedzwa kwakawanda uye kuvimba kuti uwane timu kubva Kubudiriro kusvika kuTest 1, Bvunzo 2, UAT, uye muKugadzira.
Sandeep Anand, Director weData Platform, hunhu MotioCI's shanduro yekudzora kugona. Sesangano rezvemari, CoBank inowanzo kuongororwa uye kuwana mukana nekukurumidza kumishumo kwakakosha. With MotioCI, timu inogona kukurumidza uye nyore kumhanyisa mushumo unoratidza nhoroondo yese yechinhu chero chipi zvacho cheCognos. CoBank inovimba neiyo MotioCI repository senge yavo imwe vhezheni yechokwadi yekuwongorora kwe / maererano neCognos zvemukati.
Sandeep akatsanangura, "Kuva neshanduro yekutonga pane chero chinhu chinoiswa munzvimbo dzakasiyana kunobatsira zvakanyanya. Inopa kuoneka kuri pachena kwete chete kwepro promotion, asi ndiani akazviita, zvavakaita, uye zvinoita kuti ongororo iyi ive nyore. ”
Nokukurumidza Cognos Upgrades
Yakasvika nguva yekukwiridzira kune yazvino vhezheni yeCognos, CoBank yakasimudzira yayo iripo MotioCI mari. CoBank yakashandiswa MotioCI yeiyo yayo 2019 yekuvandudza uye iri kuronga kuishandisa iyo yayo iri kuuya 2021 kukwidziridzwa.
Lindy McDonald, maneja muboka remukati IT Data Platform, akagovana, "Uyu mutambi-mutambo. Isu tinogadzira sandbox nharaunda kana isu tichivandudza. Tine sandbox 1 uye 2, inotevera MotioNhungamiro. Imwe iri pane yekare vhezheni yeCognos, imwe iri pane iyo nyowani vhezheni. Uye nekukwanisa kumisikidza kesi dzekuyedza, kuibatanidza pamusoro, kumhanya, uye kuona kuti ndeipi yemishumo yedu mazana manomwe ine zvinyatsobuda pabhat zvinongobatsira chete. "Kana tichifanira kuzviita nemaoko chingangove chiroto."
MotioCI chigadzirwa chakavimbwa chechikwata kuCoBank, ichivabatsira kuti vashande nekukurumidza uye nemazvo, uye zvichizoguma nebasa rinotungamirwa nebasa rekusimudzira mune ramangwana.